Isidlakela sephoyisa elibhema insangu lisize ngokusindisa umhlaba | Scrolla Izindaba
Kunamaqhawe amaningi ekwehlisweni kukaDonald Trump, kepha okungenzeka ukuthi ubungakezwa ngaye yisidlakela esidwetshwe ama-tatoo:
-Uhlala esitolo esidayisa izimoto esikhundleni sokuhlala emzini wakhe osemthethweni
UJohn Fetterman ungu-Lieutenant Governor wase-Philadelphia, inhlokodolobha yesifundazwe sase-Pennsylvania okuyingxenye ebalulekile yemephu yokhetho – futhi enikeze uJoe Biden ukunqoba kwakhe uTrump.
Ugwema amasudi, ungaphezu kwamamitha amabili ubude, futhi udume ngokuba ngumuntu owabhema insangu ingakabi kwimfashini
UFetterman oneminyaka engama-51 ubonakala njengeqhawe elingaba khona ophikweni lwesobunxele lwama-Democrats. Njengoba omunye umlandeli weTwitter ephawule wathi: “u-Lt. Gov akayona nje imascot enkulu ethandekayo kepha uyindoda ahlakaniphile enerekhodi elihle lomkhondo wokwenza izinto ezinzima zenqubomgomo ezikhangayo. Ikusasa labakhethiweyo abangakwesobunxele libukeka njengoJohn nomndeni wakhe.”
UFetterman usize ngokuhola impi yokulwa nezinsolo zamanga zikaTrump mayelana nokukhwabaniswa kwabavoti e-Pennsylvania.
Ngesinye isikhathi wathi: UTrump “angammangalela isameshi” kepha ngeke kushintshe ukutholwa kwamavoti nasekubalweni kwawo ngokusemthethweni.